KALLUUMEYSIGA PEAR: MACNAHEEDA IYO DIYAAR GAROW SI AY ULA DAGAALAMAAN - KU'SAABSAN
Pear waa geed geed qurux badan oo noqon kara muujinta beertii kasta.
Laakiin waxa la sameeyaa marka qof walba oo geedka loo jecel yahay uu si lama filaan ah ku dhufto qolof?
Jeex - Cudurrada fungal caadi ahaan, inta badan laga helo geedaha cimilada dabiiciga ah. Wakiilka keena cudurku waa musqusha marsupia Venturia pirina. Khatarta ayaa ah in ubaxyada dhirta ay la jiraan cudurkan aan dhali karin ugxan iyo dhicid.
Ma taqaanaa? Way adag tahay in la rumaysto, laakiin qaraabada ugu dhow ee pear waa kor u.
Haddii aad maqashid calaamaddaan oo aadan daaweynin pear, qolofka wuxuu u guuraa caleemaha geedka waxayna sidoo kale u egtahay. Dhamaan tani waxay si xun u saameeyeen tayada goosashada mustaqbalka, sababtoo ah burooyinkeeda miro ayaa loo dhigay si qaldan. Haddii dhirta miraha duurjoogta ah ay ku dhacaan qolof, markaas jirridda mugdiga leh ee ubaxyada u muuqda midhaha, kharribaan dhadhanka midhaha.
Baro sida loola tacaalo bakteeriyada bakteeriyada, miraha, iyo caarada caarada ee ku dhuftey pear.
Calaamadaha cudurka waxaa laga arki karaa dhammaan qaybaha aboveground ee pear - Caleemaha, miraha, ubaxa iyo caleemaha. Marka uu cudurku bilowdo inuu kobciyo, dhibco yar oo muuqaal ah ayaa ka muuqda caleemaha, taas oo ugu dambeyntii madoobaato iyo ku dhacdo qaybaha kale ee geedka. Sawirta hoose waxay muujineysaa sida uu cudurku u egyahay. Iyada oo horumarinta dheeraad ah ee qolof, dhirta waxaa lagu daboolay dhibco brown ballaaran, iyo dusha miro dillaac. Natiijo ahaan, miraha way yar yahiin iyo dildilaaca qoto dheer.
Ma taqaanaa? Geed geed ayaa si ballaaran loo isticmaalaa sameynta alaabta iyo qalabka muusikada. Sidoo kale, qalabka jikada waxaa badanaa laga sameeyaa, sababtoo ah noocan oo kale ah geedku ma soo jiidanayo urka oo aan u qalmin qoyaan.
Si aan u fekerin sida loo daweeyo qolofta pear, waa inaad qaadataa tallaabooyin ka hortag ah wakhtiga. Xasuusnow in ka hortagga faa'iido leh xitaa haddii dhirta ay caafimaad qabaan oo ay keento goosashada wanaagsan. Dhamaanba, waxaa jira had iyo jeer khatarta ah in cudurku ka yimaado deriska kuwaas oo ku dhow.
Kabuub - cudur ah oo saameeya dalagyo badan: tufaax, khudaar, khudrado, cherry, ash buur, buckthorn badda, sir, baradhada.
Xeerarka ugu muhiimsan ee ilaalinta isteroberka:
Warshadu waa inay koraan meel fiican oo iftiin leh. Waxay u fiicantahay haddii dhirtu ka fog yihiin midba midka kale.
Waa lagama maarmaan in la ilaaliyo sharafta geedka, sababta oo ah laamaha jabay iyo dildilaacyo kala duwan ayaa aasaas u ah horumarinta cudurka.
Si joogto ah (hal mar sanadkiiba) waa lagama maarmaan in la saaro laamood daciif ah oo lagu daboolo dufan leh dareeraha gaarka ah.
Miraha ka soo jeeda pearka dhulka waa in isla markiiba loo soo ururiyaa si looga hortago fungus iyaga oo ku dhacaya iyaga.
Ka dib goosashada goosashada oo dhan, waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo nadiifinta beerta guud. Sidaa darteed, waa in aad gubi caleemaha oo dhan, sababtoo ah waxay mar dambe noqdaan sababta cudurada dhirta.
Waa muhiim! Haddii calaamadaha cudurku horay u soo baxeen, tallaabooyinka ka hortagga ah ma badbaadin doono xaaladda. Xaaladdan, waa inaad codsataa qalab khaas ah oo loogu talagalay paab on pear ah.
Sida loola tacaalo "karbaashka"
Cudur kasta oo geedo ah wuxuu u baahan yahay tallaabooyin adag, iyo qolof waa mid ka reeban. Si hal mar iyo dhammaanba ka takhalus cudurkan waa:
ku buufin warshadda leh vitriol buluug ah oo isku dhafan leh lime. Si ay u qabtaan dhacdadan oo kale waa inay noqotaa dhowr jeer sannadkii. Sidoo kale, natiijooyinka wanaagsan waxaa lagu helaa bareebka Bordeaux (waxaad sidoo kale isticmaali kartaa oxychloride copper ama kolloidal kolloid) iyo sulfate copper;
si joogto ah uga takhalusaan qaybaha ay waxyeellada geedka (gaar ahaan haddii caleemaha yar yar);
burburin miro khafiif ah.
Maaha mid ku filan in la ogaado waxa loo daweeyo isteroberka, sababtoo ah waxaa jira sidoo kale jadwal shaqo oo geedo ah. Xaaladaha daran, geedka ayaa u baahan 5 daaweyn sanadkiiba:
Marka kelyuhu ay sameeyaan oo kaliya barar iyo barar. Daweynta sulphate Copper waxaa lagu talinayaa.
Marka burooyinku bilaabaan inay sameeyaan. Waa hagaagsan yahay fangasaska "Skor."
Marka dhirta joojiso ubaxyada. Mar labaad, "Skor" fungicide ayaa ku habboon.
Dhimane bil kadib daaweynta ugu dambeysa.
Mashiinkaas waxaa lagu fuliyaa noocyo jaad jiilaal ah bilowga xilliga dayrta ama dhamaadka xagaaga.
Waa muhiim! Xusuusnow in ay lagama maarmaan u tahay daroogooyinka kale, sababtoo ah buufinta aan isku mid ahayn waa wax aan fiicnayn.
Si aan u fekerin sida loola tacaalayo qolofta, waxaad dhali kartaa noocyo u adkeysanaya cudurka. Sidaa darteed, doorashada geedo, mid waa in la fiiriyaa noocyada soo socda: "Belarusian Late", "Annushka", "Yanvarskaya", "Rusanovskaya", "Oryol Beauty", "Yesiniskaya", "Nerussa" iyo kuwo kale. Dhammaan noocyada noocaan ah waxay leeyihiin iska caabin kala duwan ee cudurka iyo ma siin karaan boqol boqolkiiba hubin in qolof uusan ka muuqan doonaa iyaga.
Sidoo kale akhri waxyaabaha ku saabsan noocyada kala duwan ee pear iyo fruiting varieties: "Duchess", "Bergamot", "Avgustovskaya Dew", "Fairytale", "Otradnenskaya", "Elena", "Lada", "Just Maria", "Nika", "Severyanka" "," Krasulya "," Rogneda "," Kokinskaya "," Marble "," Cathedral ".
Xasuuso, inaad koraan beeri wanaagsan oo aad is ilaalisid caafimaadkaaga, waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u qaadato hababka ka hortagga. Haddii ay dhacdo in fangasku horay u dhuftey geedka, waxaa lagama maarmaan ah in si deg deg ah loo isticmaalo tallaabooyinka xakamaynta xakamaynta. Si aad uugu mahadcelisid daryeelkaaga, dhirtu waxay ku farxi doonaan quruxooda, dhererka iyo midhaha dhadhan fiican leh.